Global Voices teny Malagasy » Ny Herinandro Tao Amin’ny Bilaogy Palestiniana: May Izao Tontolo Izao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Aogositra 2017 10:09 GMT 1	 · Mpanoratra Naseem Tarawnah Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Palestina, Ady & Fifandirana, Fifindràmonina, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Tanora, Tontolo_iainana, Voina, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Raha manatelina an'i Libanona ny lelan'ny ady, mbola mitohy ny fanafihana an'i Gaza. Maro amin'ireo namoy ny ainy no zanaka Palestiniana , ny sasany zara raha herintaona monja, ary satria mikarakara handevina azy ireo ny fianakaviana, mametraka fanontaniana lehibe i Haitham Sabbah  hoe: “Ahoana no hanadinoantsika? Ahoana no hamelantsika heloka? “
Satria manako ny feon'ny tifitifitra avy ao akaiky, ao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Al-Magazi , nandre ny iray tamin'ireo tovovavy tao amin'ny foiben'ny ankizy tao amin'ny tobin'i Nusseirat i i Mona El-Farra milaza hoe: “Tsy misy afaka manakana ahy tsy hanonofy, tsy misy olona afaka manaisotra ny nofiko.”
Nitsidika ireo toby sy toeram-pitsaboana vonjimaika tany Gaza andro vitsy lasa i Mona, ka manana tantara maro holazaina; tantaran'ny alahelo , ny fahalalahana  sy ny ankizy miaritra ao Gaza izay mbola manohy manofy mandihy .
Mahita i Laila El-Haddad fa mbola sarotra ny mibilaogy avy ao Etazonia, indrindra rehefa mifangaro ny vaovao avy any an-tanindrazana . Raha nandositra tao Syria ny rafozany, nilaza taminy ny rahalahin-drainy ao Gaza fa noho ny tsy fisian'ny herinaratra ao an-toerana, mihinana izay nandrahoiny amin'ny andro iray ihany ny olona, manampy ny fahakiviana miangona ihany koa ny tsy fahampian-drivotra sy ny hafanana mandritra ny fahavaratra. Mandritra izany, Fida, mpikatroka naman'i Laila, avy ao Gaza, nanoratra mailaka tany aminy miaraka amin'ireo sombin-tsary ahitana ny sisintanin'i Rafah : “Niverina nody aho ary nihevitra fa afaka manao zavatra, saingy nandravarava sy namono olona betsaka ny Israeliana, ary ao Rafah, amin'izao fotoana izao, maro ireo monina any an-tsekoly noho ny faharavan'ny tranon'izy ireo. “
Tsy gaga i Fayyad ao amin'ny KabobFest tamin'ny lahatsarin'i Zawahiri farany teo , satria nanandrana nijapy tamin'ny onjam-panohanana an'i Palestina sy Libanona vao haingana izy, izay mijery ny Al-Queda amin'ny rikoriko, araka ny mahazatra, ny hetsika fanoherana tao.
Raha nanjary nalaza tao amin'ny bilaogy Palestiniana  ireo sary nalain'ireo olom-pirenena Isiraeliana mampiseho balafomanga mialoha ny handefasana azy ireo tao Libanona sy Gaza, manontany tena i Fayyad raha heverina fa “fampihorohoroan'ny Jiosy ” izany satria: “Raha misy silamo iray manao heloka bevava, mandalo fitsarana avokoa ny mpiray fivavahany aminy iray manontolo.”
Ao Hebrona, Katie avy ao min'ny Postcards From Palestine indray manoritsoritra ny herinandro feno fanorisorenana izay manomboka amin'ny fianakaviana Palestiniana iray miezaka mankalaza aniversera  na dia eo aza ny fiharatsian'ireo mpifanolo-bodirindrina voanjo Isiraeliana sy ny firotsahan'ny tafika israelianina antsehatra, ary manontany tena “na tsy ara-dalàna na tsia ity fety amin'ny andro nahaterahana ity“, ary namarana ny lahatsoratra tamin'ny fahadisoam-panantenany noho ny fidarohana sy ny fanagadrana  ny namany izy.
Famaizana faobe sy tetikady mampitahotra: Nandika ny teny voasoratra amin'ireo takelaka nalatsak'ireo fiaramanidina Isiraeliana avy any amin'ny habakabaka  ho azon'ny olona i Naj avy any Gaza. Mandrakitra ny haben'ny fahasimbana izay mety naterak'ireo fanafihana Isiraeliana sasany nandritra ny telo andro  ihany koa i Naj.
Any amin'ny faritra hafa, any andrefan'i Nablus, nanidy toeram-pisavana sy nanokatra izany vetivety fotsiny ny tafika Isiraeliana mba hamela ireo voanjo Isiraeliana ihany hiditra ao, ka nahatonga ireo Palestiniana am-polony diso fanantenana hanao fihetsiketsehana tsy misy herisetra  amin'ny fatoriana amin'ny tany mba hanakana ny arabe amin'ny vatan'izy ireo. Novalian'ny tafika isiraeliana tamin'ny daroka mahery vaika sy feona grenady izany.
Tamin'ny volana Martsa lasa teo, namoaka lahatsoratra roa mahaliana  momba an'i Samia, mpitsoa-ponenana Palestiniana iray hafa miezaka miampita sisintany hitazanana ny tanindrazany i Haitham Sabbah. Vao haingana, nanambitana ilay bilaogera Palestiniana iray, Reem, tafahoana taminy niresaka  momba ny dikan'ny fandraràna tsy hiditra ao an-tanindrazan'ny tena.
Farany, Hayam Noir nanoratra taratasy misokatra ho an'i Kofi Annan , Dr. Marcy Newman indray nanoratra ho an'i Isiraely. 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/14/105301/
 zanaka Palestiniana: http://palestinianpundit.blogspot.com/2006/07/21-palestinians-killed-in-gaza-today.html
 mametraka fanontaniana lehibe i Haitham Sabbah: http://sabbah.biz/mt/archives/2006/07/27/new-massacre-in-gaza/
 izay mbola manohy manofy mandihy: http://fromgaza.blogspot.com/2006/07/during-my-visit-to-childrens-center-in.html
 vaovao avy any an-tanindrazana: http://a-mother-from-gaza.blogspot.com/2006/07/update-from-gaza-and-lebanon.html
 sombin-tsary ahitana ny sisintanin'i Rafah: http://a-mother-from-gaza.blogspot.com/2006/07/pictures-from-rafah-crossing.html
 lahatsarin'i Zawahiri farany teo: http://kabobfest.blogspot.com/2006/07/fk-off-zawahiri.html
 bilaogy Palestiniana: http://me-in-jordan.blogspot.com/2006/07/israelis-teach-their-children-to-enjoy.html
 fampihorohoroan'ny Jiosy: http://kabobfest.blogspot.com/2006/07/is-it-jewish-terrorism.html.
 mankalaza aniversera: http://moomin13.livejournal.com/33637.html
 fidarohana sy ny fanagadrana: http://moomin13.livejournal.com/35424.html
 amin'ny habakabaka: http://a-voice-from-gaza.blogspot.com/2006/07/leaflets-from-israeli-occupied-skies.html
 telo andro: http://a-voice-from-gaza.blogspot.com/2006/07/results-of-past-three-days.html
 hanao fihetsiketsehana tsy misy herisetra: http://www.palsolidarity.org/main/2006/07/26/palestinians-open-checkpoint-by-laying-down-on-settler-road/
 lahatsoratra roa mahaliana: http://sabbah.biz/mt/archives/2006/03/31/refugee-number-xxxxxx-million/
 tafahoana taminy niresaka: http://raindrop.wordpress.com/2006/07/25/meeting-a-palestinian-resistant/
 taratasy misokatra ho an'i Kofi Annan: http://poetry4palestine.blogspot.com/2006/07/kofi-annan-do-you-care-about.html
 ho an'i Isiraely.: http://bodyontheline.blogspot.com/2006/07/open-letter-to-israel.html